Muxuu noqon karaa dagaalka xiga ee Mareykanka iyo Shiinaha? - BBC News Somali
Hardanka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa soo socday in muddo ah
Labada dhinacba waxay sannadihii lasoo dhaafay si adag ugu dagaallameen dhinaca ganacsiga, waxaana ka dhahsay khasaare xoog leh oo soo gaaray dhaqaalaha caalamka.
"Waxaan dhex galnay xaalad cusub, waxaana sii xoogeystay tartanka Mareykanka iyo Shiinaha, haddana wuxuu gaaray heer ka sarreeya halkii uu horay u taagnaa", waxaa sidaas yidhi Michael Hirson oo qaaradda Aasiya agaasime uga ah shirkadda lagu magacaabo Eurasia Group.
"Heshiiska ganacsiga wuxuu ku ekaan doonaa hal dhinac oo ah tartanka dhinaca awoodda ee Shiinaha iyo Mareykanka, balse waa mid ku meel gaar ah oo kaliya, saameyntiisuna way xaddidan tahay", ayuu yidhi.
"Waddan walba wuxuu hadda ogaaday in tiknoolojiyadda ay saldhig u tahay hormarinta barwaaqada, dhaqaalaha, iyo waliba cududda milatariga", ayuu yidhi Stephen Olson oo ka mid ah aqoonyahannada cilmi barista dhinaca dhaqaalaha ka sameeya hay'adda Hinrich Foundation.
Balse mas'uuliyiinta Huawei ayaa sheegay in shirkaddoodu ay tahay mid madax bannaan oo maamulkeedu uusan hoos tagin dowladda Shiinaha.